Wednesday July, 08 2020 - 10:40:46
Friday October 11, 2019 - 14:40:47 in by salman abdi
Dawladda Somaliland oo ka Hadashay in Shirkadda Uganda Airlines ay Markii u Horreysay Duulimaad ka Bilowdo Hargeysa Xukuumadda Somaliland ayaa jecel inay Shirkadda Diyaaradaha ee Uganda Airlines ay duulimaad cusub ka bilowdo magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland.
Sidaasna waxadaabacayWargeyska East African Business Week ee ka soo baxa Magaalada Kampala, oo ay soo xigatay Wakaaladda Wararka Somaliland ee SOLNA.
Warsiduhu wuxuu ku warramay in diyaaradda Uganda Airlinesayaa shaacisay toddobaadkan inay duulimaadyadeeda Gobolka Bariga Afrikaay ku soo kordhinayso saddex duulimaad oo cusub.
Shirkadaha Diyaaradaha ee Uganda ayaanoqonaysa tii labaad ee dalalka bariga Afrika ee soo labeysa Shirkadda diyaaradaha Itoobiya oo duulimaadyo toos ah ku timaada Madaarka caalamiga ah ee Cigaal.
East African Business Week wuxuu intaas ku daray in dawladda Somaliland aysidoo kale danaynayso in Shirkadda Diyaaradaha ee Kenya ay duulimaadyo ku tagto Hargeysa, arrintaasi oo uu dedaalugu jiro Wakiilka Somaliland u qaabilsan Kenya Baashe Cawil Cumar oo xusay in ay jiraan ganacsato ka dhex shaqeysta Hargeysa iyo Nairobi oo u baahan inay toos iskugu xidhmaan halkii ay ka sii mari lahaayeen Addis-ababa.